Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 101
Ndinethamsanqa elaneleyo lokuba ndidibanise utywala bendawo, kwaye ndizame iindlela ezahlukeneyo zokungenisa ikofu kunye nebhiya eyahlukeneyo. Ndiza kuthetha malunga nesiseko sexesha lebhiya. Luthini uluvo lwakho? Yabelana nam ngamava akho malunga nendlela yokwenza notywala ngeendlela ezahlukeneyo aaron@nbcoff.com, Ndiya kukuphendula ngokukhawuleza.
Previous: I-Cheers ku-Brewers encinci kunye ne-Independent
Okulandelayo: Inkonzo yokuThengwa kweeMfuno zaBaxumi ngabanye